Warshad Xirmooyinka Wareegtada Shiinaha iyo soosaarayaasha | Jitai
Construction Dhisidda guryaha: Xayndaabka waxaa lagu sameeyay shaabbad farsamo, taas oo ah mid aad waxtar u leh sidaas darteedna ku habboon wax soo saar ballaaran. Tilmaamaha ayaa badanaa laga soo saaraa hoosta taas oo ku habboon habka rakibida fiilada.
Materials Qalabka guryaha: Xayndaabka waxaa laga samayn karaa 4J29 Kovar alloy, 4J42 ama bir qabow duuban, dhammaantoodna waxaa lagu gartaa kalsooni sare.
Options Fursadaha Lead: Leads waa cylindrical waana toosan yihiin waxaana badanaa laga sameeyaa 4J29. Isticmaalayaasha waxay ka dooran karaan tiirka ama qaabka 'cidiyaha madaxa' dhamaadka isku xidhka.
La Qaababka Lead: Leads ayaa laga soo bixiyaa xagga hoose iyada oo leh xulashooyin kala duwan oo qaabeyn ah oo loogu talagalay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.
Pin Dhulka pin: Jagada biinanka dhulka ayaa sidoo kale lagu go'aamiyaa shuruudaha isticmaalaha.
Daboolida daboolka: Daboolku waxay u adeegsadaan alxanka garaacista, alxanka daasadda ama alxanka laysarka si loogu daboolo xayndaabka daboolka waxaana loogu talagalay inuu waafaqo wareegga xayndaabka.
Options Ikhtiyaarrada gogosha: Isticmaalayaasha waxay ka dooran karaan dahabiga buuxa ama xulashada dahaarka iyo dariiqyada.
Waxaa loo dhisay inuu iska caabiyo jawiga daran, xirmooyinka wareegsan ee Jitai, haddii kale loo yaqaan isku xirayaasha hermetic, waxay leeyihiin tiro codsiyo aan xadidneyn. Laga soo bilaabo cirka ilaa badda, waxaan bixinnaa xalal caadi ah oo habeysan oo loogu talagalay caqabado badan oo isku xirnaanta ah. Waxaan ku takhasusay galaasyada iyo baakadaha dhoobada xiran ee dhoobada ah si loo hubiyo in elektaroonigga xasaasiga ah ee ku lifaaqan xirmada laga ilaaliyo astaamaha waxyeelada u leh jawiga dhulka iyo wixii ka baxsan. Jitai wuxuu sameeyaa baaritaano taxane ah oo tayo-soo-saar ah kadib si loo hubiyo astaamaha waxyeellada leh sida oksijiinta iyo huurku inaysan lahayn waddo ay ku dhex galaan xayndaabka, iyagoo hubinaya in waxyaabaha ku jira ay weli ku xiran yihiin qaybta guud ahaan.
Hore: Iibinta kulul ee Shiinaha 2.54mm Pitch 4 Pin Single Row Long Pin Male Female Header
Xiga: KU Xidhmooyinka